Siren အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကြားရင် ဦးစားပေးစေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Siren အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကြားရင် ဦးစားပေးစေချင်
Siren အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကြားရင် ဦးစားပေးစေချင်
Posted by padonmar on Aug 5, 2013 in Creative Writing | 48 comments
Siren ဆိုတဲ့ အရေးပေါ်ဥသြသံကို လူနာတင်ယာဉ်(Ambulance)၊မီးသတ်ကား၊ရဲကားတွေ
အရေးတကြီးသွားရတဲ့အခါမှာ ကားခေါင်မိုးပေါ် မီးနီမီးဝါတွေ ဖွင့်ပြီး ဥသြဆွဲလို့
Siren အသံက လူနာတင်ယာဉ်မှာ သုံးတဲ့ အသံက တစ်မျိုး၊မီးသတ်ကားသံက တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး
ရဲကားသံကတော့ လူနာတင်ယာဉ်အသံနဲ့ တူတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တခါတလေ VIP လမ်းကြောင်း ရှိတဲ့အခါ၊(နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသွားလာရာ)သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ရဲ့
အထူးဧည့်သည်တော်တွေ လမ်းကြောင်းမျိုးမှာလည်း ရှေ့ပြေးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမှာ
ဘယ်လိုအခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ှSiren အသံကြားရင် အရေးတကြီးသွားလာရမယ့် ဦးစားပေးအကြောင်းအရာ
ဦးစားပေးသင့်တဲ့သူ ဒီကားထဲမှာပါလာပါလားလို့ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
VIP လမ်းကြောင်းဆိုရင်တော့ မဖယ်ပေးရင် ကိုယ့်ကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တာ သိတဲ့အတွက်
အခြားအရေးပေါ်ကားတွေကိုတော့ လမ်းဖယ်ပေး တိမ်းပေးဖို့ သိတဲ့သူ အလွန်နည်းနေပါသေးတယ်။
(လူတိုင်းလို့တော့ မဆိုလိုချင်ပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ လောက် မသိတတ်ကြသေးဘူးလို့ ပြောရင်
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က တောင်ဥက္ကလာ(အထင်)မှာ မီးလောင်တဲ့အခါ မီးသတ်ကားကို
ဦးစားမပေးကြလို့ အဲဒီအကြောင်း ကိုဇော်သက်ထွေး ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးဖတ်ရဘူးပါတယ်။
မကြာသေးမီက ညနေစောင်းကားကျပ်ချိန် လှိုင်သာယာ ဟောင်ကောင်ကြာဆံစက်ရုံ
မီးသတ်ကားတွေဟာ နာမည်ကျော် ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် 26.7.2013တုံးက မနက် ၉ နာရီလောက် အင်းလျားလေးနားက ပါရမီမီးပွိုင့် RC2
ဖက်ကွေ့လိုင်းမှာ စောင့်နေတုန်း ရဲကားတစ်စီး (ဆလွန်းကားပါ)Siren ဖွင့်လို့ ကျော်တက်ပြီး
ကားရှင်းနေတဲ့ ကပ်လျက် ဆန့်ကျင်ဖက်ယာဉ်ကြောထိပ်ဆုံးမှာ သွားစောင့်နေပါတယ်။
အဲဒီ ရဲကား ယာဉ်တန်းထိပ်ဆုံးရောက်ချိန် ယာဉ်ထိန်းတဲက မီးစိမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါ
ရန်ကုန်ဖက်သွားမယ့် ကားတွေဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ယာဉ်ကြောကနေ
ရဲကားလည်း Siren ကြီးဖွင့်ပြီး ငုတ်တုတ်မေ့နေပါလေရော၊
ကားအစီး ၂၀လောက် ဖြတ်သွားပြီးမှ အဲဒီနားက မော်တော်ပီကယ် မနေနိုင်တော့ပဲ ထွက်လာပြီး
လုသွားနေတဲ့ ကားတွေကို တားထားရတယ်။
အဲဒီတော့မှ ရဲကားလည်း မီးပွိုင့်ဖြတ်ပြီး RC2 ဖက်ကို ကွေ့သွားရပါတော့တယ်။
(အော် ဒို့ဗမာတွေ ရဲစွမ်းပြမည် အာဇာနည်ပီပီ ပါပဲ)
ရဲကားကိုတောင် ဂရုမစိုက်မှတော့ လူနာတင်ယာဉ်ဆိုတာကိုလည်း နိုးဂရုပါပဲ။
လှိုင်သာယာဖက်ကို နေ့စဉ်သွားပြီး အပြန် ဘုရင့်နောင်တံတားတက်ဖို့
တန်းစီနေကျဆိုတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တစ်ကြောက ကိုယ်ထူမှကိုယ်ထရတဲ့
ရပ်ရွာတွေရဲ့ စုပေါင်းဒါန လူနာတင်ယာဉ်တွေကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့ တစ်စီးတော့ တွေ့နေရပါတယ်။
နယ်ကကားတွေဆိုတော့ ယာဉ်ကြောပြောင်းပြန်လည်းမမောင်းရဲ၊ကားတွေကြားထဲလည်း မတိုးရဲ
ကားတစ်ချို့ကလည်း လမ်းမပေးကြတဲ့အတွက် တတီတီ Siren သံကိုအကြာကြီး ကြားနေရတာ
အထဲက လူနာတွက် စိတ်မချမ်းသာလှပါဘူး။
ကိုယ့်အနားက ဖြတ်ရင်တော့ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းသွားပါလို့ အော်ပြီး လက်ဟန်တွေပါပြလို့
(ကျမသိသလောက်တော့ အခြားတိုင်းပြည်များမှာ Siren ဖွင့်ထားတဲ့ကားဟာ
ကုန်ကုန်ပြောရရင် အရေးပေါ်သွားရာလမ်းမှာ မလွတ်မကင်းဖြစ်နေတဲ့
တကယ် မရှောင်သာလို့ တိုက်မိကြောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း ကားမောင်းတတ်သူတိုင်းက
အဖြစ်အပျက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် သိနိုင်မှာပါ၊
ကြားဖူးတာကတော့ US ကမီးပွိုင့်တွေမှာ Siren ရဲ့ အသံလှိုင်းကို
ခရီးအကွာအဝေးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါ သိနိုင်တဲ့ sensor တွေတပ်ဆင်ထားပြီး
အဲဒီအကွာအဝေးအတွင်းရောက်တာနဲ့ ရှိသမျှ မီးပွိုင့်တွေ နီကုန်ပါတယ်တဲ့၊
အဲဒီအခါမှာ အရေးပေါ်ကားဟာ ပထမ လမ်းပြောင်းပြန်ကဖောက်ထွက်ပြီး
မီးပွိုင့်နေရာရောက်တဲ့အခါ ရှင်းနေတဲ့ ယာဉ်ကြောမှန်ကနေ လိုရာခရီးကို
အမြန်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာ မှန်မမှန် သူကြီးသက်သေခေါ်ရမှာပဲ)
အရေးပေါ်ယာဉ်တွေကို ဦးစားပေးဖို့ ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းတွေကို ပြည်သူတွေ
နားယဉ်စေရန် အသံလွင့်မီဒီယာတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
(တစ်ချိန်က မြန်မာ့အသံရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က
ဒီလို အရေးပေါ်ယာဉ်တွေကို ဦးစားပေး ဂရုစိုက်သင့်သူတွေထဲမှာ ကားတွေတင်မကပါဘူး၊
လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ လူတွေ၊တိရစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းသူတွေလည်း ပါပါတယ်။
ဒီရက်ထဲ သတင်းတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ညောင်တုန်း ဆားမလောက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ တောင်သူလယ်သမားဆေးရုံက လူနာကို
ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ အရေးပေါ်လာပို့တဲ့ လူနာတင်ယာဉ်ဟာ ထန်းတပင်မြို့နယ်မှာ
လူနာတင်ယာဉ်မောင်းဟာ အတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့သူကို ကားပေါ်တင်လာပြီး
မူလလူနာကို ဆေးရုံအရောက်ပို့ပါတယ်တဲ့။ပြီးမှ ကားတိုက်ခံရတဲ့လူနာကို
ကားတိုက်ခံရတဲ့လူ သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပြီး လူနာတင်ယာဉ်မောင်းသူကို
ဘယ်နေရာ ဒဏ်ရာရလို့ သေဆုံးရတယ်။
ဘာကြောင့် မြို့ထဲဆေးရုံကို လူနာပို့ပြီးမှ အင်းစိန်ဆေးရုံပြန်ပို့ရတယ်ဆိုတာတွေတော့ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလူနာတင်ယာဉ်မောင်းဟာ တိုက်ခံရသူကို ဆေးရုံသို့ ကုသပေးရန်ခေါ်လာသေးတယ်
ဆိုတာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ် မစုတ်ချာဘူးလို့မြင်ပါတယ်)
ကျမကိုသာ ဒီကိစ္စမှာ နိုင်ငံခြားမှာလို ဂျူရီအဖြစ်ခေါ်ရင် ကျမကတော့ အမှုကလွတ်စေဖက်ကနေ
အသက်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူနာကို အသက်ကယ်နိုင်မယ့်နေရာသို့ အချိန်မီ
အများပြည်သူရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို မီးဘေးမှ အချိန်မီငြိမ်းသတ်ကာကွယ်ပေးမယ့်
ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်နေတာကို အချိန်မီအရေးယူနှိမ်နှင်းပေးမယ့် ရဲကားမောင်းသူတစ်ဦးကို
လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပြတ်ပြတ်သားသား မပေးထားရင် နောင်ကို ဘယ်သူက
Siren ဖွင့်ထားတဲ့ကားကို လွတ်အောင် ရှောင်မပေးလို့ တိုက်ခံရရင်
လူနာတင်ယာဉ် အချိန်မီ ဆေးရုံမရောက်လို့ သေရတဲ့လူနာ၊
မီးသတ်ကားအချိန်မီ မရောက်လို့ ဆုံရှုံးရတဲ့ အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊
ရဲကားအချိန်မီ မရောက်လို့ လက်လွန်သွားတဲ့ တရားခံလွတ်သွားတဲ့ ရာဇ၀တ်မှု တွေထဲမှာ
ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်မှုတွေ မရှိပါစေနဲ့ လို့သာ နေ့စဉ်ဆုတောင်းနေရတော့မှာပါပဲ။
(ဒီကိစ္စကို ကျမရဲ့ ရွာအ၀င် ဒုတိယမြောက်ပို့စ် ဖြစ်တဲ့ Ambulance နဲ့ အသိစိတ်လေးရှိစေချင်
မှာလည်း ရေးဖူးပါတယ်။ခဏခဏလည်း ဗားရှင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတိုင်းရေးဖြစ်နေအုံးမှာပါပဲ။
အမှန်တော့ ဒီလိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးစရာ မလိုတော့တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိသော
တာဝန်သိစိတ်ရှိသော လူများများ ရှိတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေချင်လှပါပြီ၊
so so far from it ပါ
လက်မောင်းတောင့်အောင် အားမွေးထားပါအုန်း ဒေါ်ဒေါ်
မနေ့က မိုးမိလို့ အနားရနေတာ ပျင်းလာလို့ လာလည်တာ
ကျမကို ပုံမှန်မေးလ်ပို့ပြီး community တခုမှာ ၀င်ဆွေးနွေးတာ အနုစားနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပါလို့ အမြဲသတိပေးတတ်တဲ့ သတိရတတ်တဲ့ သူတယောက်ကို ကျမက အမြဲကျေးဇူးတင် သတိရနေတာပါလို့
လမ်းကြုံရင် ဒီကွန်းမန့်လေး ၀င်ဖတ်သွားပါစေ။
အသံလေး ပြန်မြင် ရတာ ကို ဝမ်းသာလှပါ့ ပုလေး ရေ။
အရီး ကတော့ အနုစားတွေ လုပ်ဖို့ ရွာထဲ ဝင် နေရတာနဲ့ တစ်ခြား နေရာ က သူတွေ နဲ့ အပြင်းစား အိုးစားကွဲ နေပြီ။
ခင်တဲ့ သူတွေ နဲ့ စာအဆက်အသွယ် မလုပ်နိုင်တာ ကြာပါပေါ့။
မအားလဲ အားချိန်လေး နဲနဲ လောက် နဲ့ ပြန်လာပါနော်။
သူ့ယောက်ျား က မမာဝူးတဲ့ ခည…
ပြုစုနေရတာနဲ့ အချိန်တော်တော် ပေးရတယ်ဆိုပဲ..
အမြဲသတိရတဲ့ထဲမှာ ဒေါ်ဒေါ်တို့လည်းပါပါတယ်လို့ လမ်းကြုံဖတ်တဲ့သူ သိပါစေ။
ဟောင်ကောင်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုကလည်းပေါ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကလည်းကောင်း ဆိုတော့
နှာစေး ချောင်းဆိုး ခေါင်းကိုက်တာတောင်မှ လူနာတင်ယာဉ် ခေါ်တတ်ကြပါတယ်…
မောင်ကျောက် နေတာ လမ်းမကြီးဘေးဆိုတော့၊ ရောက်စက အိပ်နေရင်း လန့်နိုးပါတယ်…
အခုများတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားတာ အရေးပေါ်ခေါင်းလောင်းတီးရင်တောင်မှ နိုးမယ်မထင်…
ဒီမှာ အရေးပေါ် Siren ကို မမှူတာကတော့ ပွတ်ကိုကို ပွတ်မမ များပါပဲ…
လမ်းသွားရင်း၊ လူကူးမျဉ်းကြားက လမ်းကူးရင်း ဘေးဘီကို ဂရုမစိုက်…
အိုင်ဖုန်း အိုင်ပက်ကို အားစိုက်ပြီးပွတ်နေတာ အရေးပေါ်ယာဉ်က ရပ်ပေးရတဲ့အထိပါ…
ဟီ ဟိ မောင်ကျောက်သာဆိုရင်တော့ အမြင်ကပ်လို့ တိုက်ချပလိုက်မယ်…
ဒို့ဘားမန်းတွေလည်း ပွတ်ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ ခေတ်မီနေပါပြီနော်။
ခေါင် မလုံဘူး အာတီဒုံ။
ဖောင်ဒေးရှင်း လည်း မခိုင်ဘူးးး
ယိုယွင်းတဲ့ နေရာတွေက အများကြီးပဲ။
နှစ်မွာအသဲ ရုပ်ရှင်ထဲက ဒေါ်မြလေးလို
ဒါပေမယ့် သူကြီးအဆို ကြယ်ငါးလေးတွေ ရေထဲချ၊
ကိုနို့အလို ကျောက်ခဲလေးတွေ ပစ်ပေးချင်တော့
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လောက်တုံး က ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင် မီးပွိုင့် မှာ၊ ကျွန်တော် ငှါးစီး လာတဲ့ တက်စီကို လူနာတင်ကား က အတင်းကျော် ဖို့ (ဥဩ မဆွဲပါ) ကြိုးစားတော့ ကိုရွှေကားသမားက လမ်းမပေးချင်ပါ။ အစ်ကို ရယ် ကျွန်တော်တို့က အရေးမှမကြီးတာ၊ လမ်းပေးလိုက် ပါဆိုတော့ ငါ့ညီမသိလို့၊ ဒီကောင် တွေ အရေးမကြီး လဲ ဒီလိုဘဲ။ ကြည့်နေ မီးပွိုင့် မှာ၊ ဥဩ ဆွဲပြီးမီးစိမ်း တောင်းလိမ့် မယ်တဲ့..ဗျာ။ သူ ပြောတဲ့ အတိုင်းဘဲ လူနာတင်ကားသမား လဲ ဥဩ ဆွဲပြီး မီးပွိုင့် ကိုဖြတ် သွားပါတယ် ။ ကျွန်တော် လဲလျှာရှည် ပြီး သူဆေးရုံ ကိုမြန်မြန် ပြန်ရောက်မှ တစ်ခြား လူနာရှိ ရင် တင် ပို့နိုင်မှာ ပေါ့၊ မြန်မာနိုင်ငံထက် အဆ ပေါင်း မြောက်များစွာ (အဆ ပေါင်း မြောက်များစွာ) တိုးတက် နေတဲ့နိုင်ငံတွေ မှာတောင် ခဏ ခဏ ဆေးရုံ ကားမလောက်တဲ့ ကိစ္စ ကြုံ နေတာ လို့ပြော တော့ သိပ်တော့ မကြည် ဘူး ။ ကား ပေါ် ကဆင်းတဲ့ အထိ မှုန် တေတေ နဲ့၊ ဘာမှတော့ ထပ် မပြော တော့ ဘူး ။
ပုံမကျတဲ့ ဥပ​ဒေကို အပြစ်​​ပြောချင်​တယ်​ ။
ကားနဲ့ပတ်​သက်​ပြီးလူ​သေပြီဆိုတာနဲ့ ရမ်းသမ်းပြီး ဒရိုင်​ဘာကို အမှုလပ်​တာပဲ ။
အဲ … အ​ရေး​ပေါ်ကားကို အထူးသဖြင့်​ ​ဆေးရုံကားတို့ မီးသတ်​ကားတို့ကို အဖက်​မလုပ်​​တော့တာ ကျ​နော့အထင်​ ၈၈ ​နောက်​ပိုင်း ကတည်းကထင်​တယ်​ ။
ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ …. ဟိုကား​တွေကို အလန့်​တကြားဖယ်​​ပေးရင်း အမြင်​ကပ်​သွားကြတာများလားးးးးး
​နောင်​မှ လမ်း​ဘေးမရပ်​​ပေးမိလို့ ပါးပူသွားခဲ့ ရတဲ့ စပယ်​ယာတစ်​​ယောက်​အ​ကြောင်း ​ပြောပါဦးမယ်​ …
တစ်ခါကနဲ့ ပါးပူသွားသော စပယ်ယာ ဖတ်ချင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်ကားလည်း အရေးကြီးလို့သွားချင်နေသလို အခြားလမ်းပေါ်က ကားတွေလည်း အရေးကြီးလို့ သွားချင်နေကြတာနေမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မီးပွိုင့်တွေ လမ်းဆုံတွေမှာ ယာဉ်ကြော တစ်ခါပိတ်ရင် သေလောက်အောင်စောင့်ရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဆိုတော့ ရပ်ပြီးမစောင့်ချင်ကြတော့တဲ့ စိတ်အခံတွေက အရေးပေါ်ကားဥသြသံကြားလည်း လမ်းဖယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအနိုင်ယူ သွားခဲ့တာဖြစ်မယ်ဗျ။ မန်းမှာတော့ ဥသြဆွဲသံနဲ့ မောင်းလာရင် အတော်များများ လမ်းဖယ်ပေးကြပါတယ်၊ ရန်ကုန်လောက် လမ်းပိတ်မှုနည်းနေသေးလို့ဖြစ်မလားဘဲလေ။
သကြားကလည်း ဒီလိုပဲ ပြောတော့ မန်းသားတွေက ရန်ကုန်သားတွေထက် တော်ကြပါတယ်။
” ဒီနေရာမှာ မှန်မမှန် သူကြီးသက်သေခေါ်ရမှာပဲ ”
မ ပဒုမ္မာ ။
ကျနော် သိတာလေးတော့ ဗဟုသုတ ပြောပြမယ်နော် ။
ဒီဖက်နိုင်ငံမှာ Siren ပီးပေါ် အသံတွေကို Category ထပ်ခွဲထားသေးတယ်တဲ့ ။
အရမ်း အရေးပေါ်ရင် အသံ တစ်မျိုး ထပ်ပြောင်းတယ်တဲ့ ။
ရဲ တွေ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေက သိထား ကျက်ထား ရတယ် ပြောတယ် ။
ကျမနားထဲတော့ အဲဒီ ပီးပေါ်တွေက အတူတူပဲ ထင်မိတယ်။
အဲသလို အရမ်းအရေးပေါ်အသံ မခွဲလည်း
အရေးမကြီးသွားရတဲ့အခါ Siren မဖွင့်ရင် ဦးစားပေးစရာ မလိုဘူးပေါ့။
Siren ဖွင့်ရင် ဦးစားပေးကို ပေးသင့်ပါတယ်။
ကားမောင်းသူတွေကလည်း တကယ်မလိုအပ်ပဲ siren မဖွင့်ဖို့
(မလိုပဲဖွင့်ရင် အရေးယူနိုင်တဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေလည်းရှိသင့်တာပေါ့)
ဟုတ်တယ် အာတီဒုံရဲ့… ပြည်သူတွေက ဖယ်မပေးသလားဆို .. အဲ့ဒါတင် မကသေးဝူး… ဟိုတစ်ခါကဆို လှည်းတန်းကနေ မြေနီကုန်းကို taxi စီးတာ.. လမ်းတစ်လျှောက် လူနာတင်ယာဉ်နဲ့တိုးတယ်… လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှာလည်း လွှတ်မပေးဘူး… နာနတ်တောမှာလည်း လွှတ်မပေးဘူး..အ၀ိုင်းမှာလည်း တစ်ခါစောင့်ရတယ်..မြေနီကုန်းပွိုင့်မှာလည်း လွှတ်မပေးဘူး… မီးပွိုင့်က ရဲတွေကို အရမ်းစိတ်တိုတာပဲ… ကန်တော့ကန်တော့..သေစရာရှိတဲ့သူဆို မီးပွိုင့်တင် သေနေတာကြာပြီ…. ဟိုပို့စ်လေးကိုတောင် သတိရတယ်..မီးပွိုင့်မှာ ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုလား… စနစ်လား..လူလားဟင်င်.. (ဒီစာကို သဂျီးမမြင်ပါစေနဲ့တော်..)
အဲဒီပို့်စ်က ရာဇ၀င်လူဆိုးရေးတာလို့ ထင်တယ်၊
လူရော စနစ်ရောလို့ ထင်ပါတယ်။
လူနဲ့ စနစ်မှာ ပြောင်းဖို့လွယ်တဲ့ လူကစပြောင်းသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ မက ။မကြာခဏ ပါဘဲ ။ လမ်းပေးချင်ရင်တောင် လမ်းဘေး ချမရတဲ့ ဘ၀လည်း ကြုံဘူးပါတယ် ။
လူနာတင် ကားတွေ ကိုတော့ သိဝူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ည ကြက်အူချောင်းစက်ရုံမီးလောင်တော့ မောင်ယာဉ်ထိန်းတွေ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှာ ထွက်လို့ မီးသတ်ကားတွေ အတွက် လမ်းရှင်ပေးနေလို့ ကျေးဇူးတင်မိကြောင်းပါ ။
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း စဉ်းစား ကြည့်မိတယ် .. မောင်ယာဉ်ထိန်းတို့ ဘဲ ဥသြသံမကြားလို့ မထွက်တာလားဆိုတာ … ကြားရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းပေးကြတယ် ထင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက်ပေါ့နော် ..
အန်တီဒုံ ပြောသလို တစ်ခါတစ်ခါ နယ်က ကားများ မတိုးရဲ မ၀င်ရဲဖြစ်နေတာတွေလည်း သတိထားမိပါတယ် …. အများအားဖြင့် လမ်းမပေးကြတာ Taxi နဲ့ လိုင်းကားတွေ ထင်မိကြောင်းပါ ။
ရဲကားတော့ အနော်လည်း တွေ့ရင် မသိချင်ယောင် ဆောင်ပစ်ကြောင်းပါ ။
စစ်ကားဆိုရင်တော့ အဝေးကြီးကထဲ က ဘေးဖယ် ထားပြီး ပြီးမှ နောက်က ရသလောက် ကပ်လိုက်မောင်းကြောင်းပါ …
တကယ်အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ မီးနီ ၂လုံးက အဆက်မပြတ်လင်းနေပီး အပြာကတော့ ငြိမ်နေတယ်တဲ့ ပီးရင်အသံရှည် ၂ချက်ဆင့် အသံတို တချက် ၂-၁ ၂-၁ မြည်တယ်တဲ့ ပီးရင် လိုအပ်ရင် ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေး စနစ်နဲ့ ကြိုတင် တောင်းခံနိူင်ပါတယ်တဲ့ ဒါပေသိ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုမှု အပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်ပေါ့ ပြောရရင် အများကြီး ပေါ့ခင်ည။
ညည်းတို့ စိနတိုင်းအတွေ့အကြုံလေးလည်း ကြားချင်သပ။
ဤကား လေးမျိုးတွင် ချက်ခြင်း အလုပ်ပြုတ်နိုင်သော ….
လူကြီးကား သည်သာ လွန်စွာ ဖြောင့်ဖြူးသော ခရီးလမ်းဖြင့် စိတ်ချမ်းသာစွာ သွားလာနိုင်လေတော့သတည်း ….။
ဘုရင့်နောင်ဘက်မှာနောက်တစ်ခုဆိုးနေတာက မီးပွိုင့်စီရင် ဘေးကလမ်းပေါက်မချန်တာပဲ
ကိုယ်ကချန်ပေးပြန်တော့ နောက်ကားက ကျော်ပီး ရှေ့လာထိုးတယ်…
ပါးဆင်းရိုက်ပြီးရင် အမောပြေ သောက်လို့ရသေးတယ်။
အဲဒီ ဘုရင့်နောင်က လောဘဒေါသအကြီးဆုံးလူတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့နေရာပဲ။ဒါ့ကြောင့် ပိုဆိုးနေတာပေါ့။
တခါသားပေါ့လေ စာဖတ်နေတဲ့ ဦးဦးမိသားစု ပြည်လမ်းပေါ်မယ် ချီတက်လာကြတယ်။ ပွိုင့်ကားတွေရှေ့နောက်အပြင် ၀ဲယာပါညှပ်လို့ မိသားစုလိုက် ကားတစ်စီးစီနဲ့ တပြုံတမချီတက်လာတာကို ဒီလောက်ပြည်လမ်းအကျယ်ကြီးကို ( လာတာက မရမ်းကုန်းကနေမြို့ထဲ ) သူတို့လာတဲ့လမ်းကြောရော မလာတဲ့လမ်းကြောရော လမ်းဘေး ချရပ်ပေးရုံမျှမက မော်တော်ပီကယ်များမျက်နှာလုပ်ချက်ကတော့ ပလက်ဖောင်းပေါ်တောင်တက်ရှောင်ပေးရတော့မလိုလမ်းကြားထဲထိချရပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲတော့လဲ အဲဒီ ၀ီယော်ဝီယော်ကို ရန်ကုန်လူထုမုန်းနေတာ မဆန်းဘူးထင်တယ်အာတီဒုံရေ။ အရင်းစစ်တော့ ဒင်းဒို့ကြောင့်။
ငရဲမင်းကြီးက ငရဲပြည်ကနေ ဖုန်းခေါ်ခွင့်ပေးလို့ ၃နာရီကြာအောင်ပြောတဲ့အကြောင်း ဖတ်ပြီးပြီမလား။
မဖတ်ရသေးရင် ရှာဖတ်ဖို့ လက်တို့မယ်။
ဖတ်ရသေးဘူးအာတီဒုံရေ။ လက်တို့ပါအုံး။ ဖတ်ချင်လို့
ဒို့သဂျီးမလာခင် ပြောထားမှ :loll:
အဲဒါကြောင့် လူတိုင်းတစ်ခုစီပဲ လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ သဂျီးကပြောတာ။
တကယ်တော့ အရင်က ဗြဟ္မစိုတရား မရှိ ဘူး လို့ သိခဲ့ဘူး တဲ့ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံ တွေ က လူတွေ မှာ ဒီနေ့ခေတ်မှာလဲ ဗြဟ္မစိုတရား မရှိ လောက်ပါဘူး။
“ချမှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံသား ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း” တွေ ကို အသေအချာ ဦးစားပေးလိုက်နာနေကြ တာမို့ “စက်ရုပ်” တွေ များ ဖြစ်နေသလားလို့။
စက်ရုပ် ဆိုတော့ ဗြဟ္မစိုတရား ဆိုတာ ဘယ်သိမလဲ နော့။
မြန်မာပြည်မှာကတော့ သည်းခံမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှု၊ သနားကရူဏာထားမှု၊ မုဒိတာပွားမှု၊ ဥပေက္ခာထားမှုဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုတရား တွေကို လက်ကိုင် ထားပြီး ကိုယ့် အတွက် ကို ကြိုးစား လုပ်နေကြတာ ကိုး။
စက်ရုပ် တွေ ဟုတ်ပါဘူး။
သူများ က ချထားတဲ့ ” နိုင်ငံသား ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း” ဆိုတိုင်း ဘယ်လုပ်လိမ့်မလဲ။
မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီ ” နိုင်ငံသား ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း” ကို ဘယ်သူက ချပြနေလဲ မသိ။
လက်ကတော့ ကားယား လို့တောင် စကားပုံရှိနေသေးတာပဲ။
ဗြဟ္မစိုရ်တရားလို့ တွင်တွင်ရွတ်တာလည်း ဒို့ဘားမန်းတွေပဲ။
အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မေတ္တာပွားတာလည်း ဒို့ဘားမန်းတွေပဲ၊
ကြားဖူးတာကတော့ US ကမီးပွိုင့်တွေမှာ Siren ရဲ့ အသံလှိုင်းကိုခရီးအကွာအဝေးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါ သိနိုင်တဲ့ sensor တွေတပ်ဆင်ထားပြီး အဲဒီအကွာအဝေးအတွင်းရောက်တာနဲ့ ရှိသမျှ မီးပွိုင့်တွေ နီကုန်ပါတယ်တဲ့၊
အဲဒီအခါမှာ အရေးပေါ်ကားဟာ ပထမ လမ်းပြောင်းပြန်ကဖောက်ထွက်ပြီး မီးပွိုင့်နေရာရောက်တဲ့အခါ ရှင်းနေတဲ့ ယာဉ်ကြောမှန်ကနေ လိုရာခရီးကိုအမြန်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာ မှန်မမှန် သူကြီးသက်သေခေါ်ရမှာပဲ)
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၁၀နှစ်လောက်ကတော့.. အဲလိုမျိုးရှိမလားပဲ..။
အဲဒီတုံးကရှိတာတခုက… လာနေတဲ့အရေးပေါ်ကားရဲ့အပေါ်ကမီးရောင်ကိုဖမ်းပြီး.. မီးပွိုင့်စိမ်း/နီပေးတဲ့ဆင်ဆာမျိုးပါ…။
အခုနောက်ပိုင်းကတော့…အယ်လ်အေမြို့ ကားလမ်းမပေါ်မှာ ဆင်ဆာတွေအကုန်တတ်ထားတာမို့.. တမြို့လုံးကားတွေအ၀င်အထွက်အသွားအလာ … စူပါကွန်ပြုတာတခုခုနဲ့ထိမ်းချုပ်နေပုံရပါတယ်..။
ညကြီးမိုးချုပ်.. ကားမောင်းသွားရင်များ.. တခြားဖြတ်လမ်းကားမရှိရင်.. ကိုယ့်အတွက်မီးတွေအကုန်စိမ်းပေးတာပေါ့…
အရေးပေါ်ကားကတော့.. ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်.. လမ်းပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုး… မီးနီမီးပြာအကုန်ဖြတ်ပါတယ်…။ အရှိန်ပြင်းပြင်းကိုမောင်းတာပါ..။
အရေးပေါ်ကား( ဆေးရုံကား၊ ရဲကား၊ မီးသတ်ကား) တွေမီးပွိုင်မီးနီဝင်ကာနီးရင်..တခါတလေ.. ဥသြသံပြောင်းအော်ပါတယ်..။ တချို့ရဲကားတွေကျ.. လောစပီကာနဲ့အော်ပြောပါတယ်…။
အသံကြားရင်.. အရေးပေါ်မီးမြင်ရင်.. မြင်တဲ့နေရာမှာတင်..ကားကိုချက်ချင်း ဘေးဆွဲချရပ်ရပါတယ်..။ အရေးပေါ်ကားလာတဲ့ယဉ်ကြောရော.. ဟိုမှာဖက်က လမ်းပြောင်းပြန်ဖက်ရော.. လမ်းဖြတ်မယ့်ကားရော.. အကုန်ထိုးရပ်ရတာပါ..။
အဲဒီ တစ်ကက်က ဘယ်လောက်တန်သလဲဆိုတာကြုံရင် ရှင်းပြပါအုံး။
ဘယ်တစ်ကက်မဆိုပေါက်ဈေးက ရဲကလိုသလိုတိုးတောင်းတာမို့ (ကားမောင်းသူရဲ့ ကံကံအကျိုးပေါ်ညှိတွက်တာမို့) အတိအကျပြောလို့ခက်ပါတယ်ခင်ဗျ..
သူဂျီး ပြောတဲ့ Ticket စံနစ် အကြောင်းက ၊
ကျနော် တစ်ခါကရေးဖူးတဲ့ သြဇီက Ticket စံနစ် နှင့် ၊
ခတ်ဆင်ဆင်ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ။
အဓိက ကျတာ နဲ့အဓိက မကျတာ ကို…
ဝေခွဲ နေဖို့ …အထိ မရောက်ပဲ…
လုပ်ချင်တာတွေ ပဲ. လုပ်နေကြလို့ …..။
အရေးပေါ် လူနာတင် ယာဉ်..က အလူးအလဲ ဖြစ်…
အဲဒီ ကားတွေ ကြား..ဟိုးအနောက်ဆုံးမှာ…မှ….
လူနာတင် ကားမောင်းသူက.. ခေါင်းတခါခါ…
လူနာ ရှင်တွေ ရဲ့ မျက်နာထားလေးတွေ က….
ပြိုတော့မယ့်မိုးလို …. ရင်နင့်စရာ….
ခဏခဏ ကြုံနေရတယ် ။
မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ..
ရှေ့တိုးမရတဲ့ လူနာတင်ကားပေါ်က လူနာရှင်ဘ၀ကို ငါဘယ်တော့မှ မရောက်ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်ကွယ်။
ဆိုစကား တစ်ခု ကြားဖူးပါတယ်
အဲဒီလို အရေးပေါ်ကား မျိုးစုံကိုတွေ့ရင် ဘယ်နေရာ ရောက်နေပါစေ သူတို့ကို လမ်းကြောင်းပေးဖို့ ဆိုတဲ့အသိက ဘယ်သူမှမသင်ဘဲ အမြင်နဲ့ စွဲသွားခဲ့တာ အခုထိပါ။
ရန်ကုန်တော့မသိ မန်းမှာလဲ အဲဒီကားတွေအတွက် လမ်းရှင်းပေးတာ အမြဲတမ်းနီးပါးမို့
ဦးမာဃတို့ဆီမှာတော့ အဲဒီ ဦးစားပေးတဲ့အကျင့် မပျောက်သေးပါကြောင်း….
သကြားတို့ မန်းသားတွေက ပိုလိမ္မာပါတယ်ဆို။
ကွန်မင့်တွေစုံမှ ရောက်တာဆိုတော့ သူများထက် ပြင်းပြင်းလေးပေါ့….
တိုက်ဆိုင်တာက ဒီနေ့မနက်ပဲ ဘုရင့်နောင်တံတားကို တစ်နာရီခွဲစောင့်ပြီးဖြတ်လာတာ….
ရန်ကုန်မှာတော့ လူများစုတွေ တစတစ လူစိတ်ပျောက်သွားကြကုန်ပါပြီ…
သတ္တ၀ါ တို့ရဲ့ မူလဗီဇစိတ်ဖြစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်စိတ် ဖြစ်လာကြတာပေါ့…။
အဲဒီစိတ်ကို ဖုံးလွှမ်းဖယ်ရှားဖို့ လူ့စည်းကမ်းတွေ ရှိလာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာမဟုတ်လား…။
လူ့စည်းကမ်းတွေ ပျက်စီးနေတာကို ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရင်
ဒီအချိန်ဟာ လူတစ်ယောက် လူတစ်စု လူတစ်ဖွဲ့ လူတန်းစားတရပ်ရဲ့ သီးသန့်အကျိုးနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကို ထည့်တွက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါ။
မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးကိုပဲ တည့်တည့်ကြည့်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်..။
မြန်မာပြည်သူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်က ကုလား၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ခမာ တွေထက် ဆိုးဆိုးရွားရွား နိမ့်ကျစုတ်ပြတ်သွားမယ့်အရေးကို အလျှင်အမြန်ကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။
ဘယ်နေရာက စလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့..
အစ က စ လုပ်ရမှာပေါ့…။
ဥပဒေမလိုက်နာသူတွေကို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲ မရှိအောင် – ဆိုတဲ့
ရည်မှန်းချက်သုံးရပ်ထားပြီး လူတွေ လူနဲ့တူဖို့အတွက် အတားအဆီးအားလုံးကို ဖယ်ရှားရမယ်။
လမ်းနယ်ကျူးကျော်သူ (အိမ်ရှင်၊ ဆိုင်ရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ကားပိုင်ရှင်၊ )တွေကို အရင်ရှင်း
လမ်းတွေမှာ ကားမောင်းလို့ရပြီဆိုရင် စည်းကမ်းမရှိတဲ့ကားတွေကိုဖမ်းပြီး
ဒရိုင်ဘာမောင်းရင် ဒရိုင်ဘာကိုလိုင်စင်ရာသက်ပန်သိမ်း ၊ ထောင်ချ
လုပ်ရဲသလား… တိုင်းပြည်ကို အဖတ်ဆယ်လို့ ရကောင်းရမယ်…
မလုပ်ရဲဘူးလား …. စိတ်ချ.. ဒီတိုင်းပြည်မကြာခင်ပျက်မယ်….
ဥပဒေမရှိ စည်းကမ်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည် ဘယ်လောက်ခံမယ်ထင်လို့လဲ…..
အဲဒါတွေလုပ်ဖို့ အရင်ဆုံး ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား အခု(တစ်သိန်းကျော်လောက်)ထက်
(အရင်ဆုံး ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား အခု(တစ်သိန်းကျော်လောက်)ထက်
ခွင်ကောင်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိလာနိုင်လို့ ၀န်ထမ်းသစ်ခေါ်ရင် လုပ်ချင်ပါကြောင်း။
(မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးကိုပဲ တည့်တည့်ကြည့်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်..။)
အဲသလို ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်မယ့်သူကို အလိုရှိပါတယ်။
နောက်ကြောကို ပြန်ပြန်မကြည့်ရဖို့လည်း လိုတယ်နော။
နှင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင် သမတ တိုင်မယ်
မူရင်းသတင်းကို သစ်ထူးလွင်မှာ ခုမှ ပြန်တွေ့လို့ မှတ်တမ်းအဖြစ်စုထားပေးပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ် မငေးစုကျေးရွာအနီးရှိ ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၃/၆ နှင့် ၁၃/၇ ကြားတွင် သြဂုတ်လ ၁ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က လမ်းဖြတ်ကူးသူ အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးက ဝင်တိုက်မိသဖြင့် အတိုက်ခံရသူ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ညောင်တုန်းမြို့နယ် ဆားမလောက်ကျေးရွာရှိ တောင်သူလယ်သမားဆေးရုံမှ ဟိုင်းလတ်အဖြူရောင် လူနာတင်ယာဉ်သည် နှလုံးဝေဒနာရှင် လူနာတစ်ဦးကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ရန် မောင်းနှင်လာစဉ် လမ်းဖြတ်ကူးသူ ဦးလှိုင်ထွန်းကို တိုက်မိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုကို စစ်ဆေးနေသည့် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“အတိုက်ခံရသူကို လူနာတင်ယာဉ်နဲ့တင်ပြီး အင်းစိန်မြို့နယ် ဆေးရုံကို တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ မနက်ကျမှ ရဲစခန်းက ဖုန်းဆက်ပြောလို့ သိရတယ်” ဟု မငေးစုကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်မင်းလွင်က ပြောကြားသည်။
သေဆုံးသူသည် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ကြက်ရှာကျေးရွာအုပ်စု မုံတစ်ချောင်း ကျေးရွာမှ လာရောက်၍ ထန်းတပင် မငေးစုကျေးရွာရှိ လယ်ကွင်းတွင် ယောက်ဖတော်စပ်သူနှင့်အတူ နေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်း လူပျောက်မှုဖြင့် လာရောက်ရှာဖွေသည့် သေဆုံးသူ၏ အဒေါ် ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ရဲအရာရှိက ရှင်းပြသည်။
လူနာတင်ယာဉ်မောင်းသည် ယာဉ်ပေါ်ပါ နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာရှင်ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ဦးစွာပို့ဆောင်ပြီး ယာဉ်တိုက်ခံရသူကို ထပ်မံသွားရောက် ခေါ်ဆောင်ကာ အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစခန်းထံမှ ထပ်မံသိရှိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်မောင်း ဦးစန်းလွင်ကို (ပ)၂၆/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၄ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် တပ်သစ်နယ်မြေရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
အဲဒီလမ်းစည်းကမ်းတွေ..လူ့ကျင့်ဝတ်တွေပြောရမယ်ဆိုရင်..ဘယ်ကအစရှာရမလဲမသိတော့ပါဘူး အန်တီရယ်…လူနာတင်ကားတိုက်ခံရတယ်ဆိုလို့..အသိတစ်ယောက်ကတော့ ဦးနှောက်အကြိတ်ကြောင့် ရောဂါတော်တော်ခံစားနေရချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လမ်း သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့လူနာတင်ကားနဲ့လူနာကိုမသေစေချင်ရင် ဆေးရုံကိုမြန်မြန်ရောက်မှဖြစ်မယ် ဆိုပြီး လမ်းကြမ်းတွေမှာတော့ ဒုန်းစိုင်းမောင်းတဲ့ကားဆရာရဲ့စေတနာတွေကြောင့် လူနာပိုလို့ဝေဒနာခံစားရရုံမက.. လူနာရှင်လည်း နှလုံးရောဂါရမတတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်..
ဆေးရုံကားဆိုတာတွေက တကယ့်အရေးပေါ်လူနာတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ကားမျိုးပဲဖြစ်သင့်တယ်..
ကြံ့ခိုင်ရေးကောင်းတဲ့ Ambulance အစစ်ကိုတော့ စီးရစေချင်တာပေါ့သမီးရယ်။
ဒါပေမယ့် ဒို့တိုင်းပြည်မှာ ဆေးရုံကို အချိန်မီ ရောက်ဖို့အရေးတောင် ခက်နေဆဲ ဆိုတော့…..